> Resource > Free > Top 5 Converter mkv free
Si uu ula socdo dhaqankan soo taraysa, waxaad u baahan tahay in aad desktop u gaar ah, laptop, la qaadi karo warbaahinta ciyaaryahan, MP3 players, consoles'ka Xararad iyo telefoonka gacanta. Sida ay jiraan dad badan oo qaabab video looga baahan yahay in ay maamulaan qalabkii, Converter video ah oo ku dari kartaa maroojin in aad noloshaada warbaahinta-murgiyey.
Muran la'aan, aad waqti aad u yar si ay u maareeyaan aad video files iyo sidaas, oo aad dhab ahaan u baahan tahay inaad u maamushaan video files ku ool ah oo dabiici ah video Converter. Si loogu badalo files, waxaad heli kartaa eegno Converter 5 mkv sare si aad video ururinta ka badan fududeeyay.
Wondershare Video Converter Free Waa Converter jiitaa-iyo-hoos u dhac u video files oo awood aad si loogu badalo ama gubi DVD guriga iyo ka qaab video kasta. Si ka duwan kale converters video, Wondershare Video Converter waxay bixisaa 30 jeer ka dhakhsi xawaaraha diinta. Waxay kaa caawinaysaa in aad videos boosaska badan iyaga oo diinta ah AVI, MKV, DVD, MP4, wmv, Jabbuuti, 3GP, MPEG, MP3 ama PSP. Ka sokow, waxa kale oo aad gubi kartid videos in folder DVD, files ISO ama DVD cajalladaha. Sidoo kale, waxaad ku qori karta videos ka Google, Yahoo, YouTube ama goobaha kale video-wadaaga.
Freemake Video Converter waa mid ka mid ah freeware video converters abuuray by Ellora Hantida Corporation. Waxaad isticmaali kartaa Freemake Video Converter si loogu badalo qaabab video, la abuuro soo duubey, arki music iyo dooxi DVDs video. Converter video Tani gubi karaa firadaha video durdurrada si Blu-ray Saxannada ama DVDs si aad u geliyaan in YouTube.
Freemake dhab ahaan waxaad fartaan Wannaagga sida barnaamij lacag la'aan ah oo awood diinta video iyo ikhtiyaarka ah in software bixisay. Iyadoo Freemake Video Converter, aad ka dhabayso kartaa video files si an AVI, MKV, DVD, MP4, wmv, Jabbuuti, 3GP, MPEG, MP3, PSP iyo sidoo kale qaabab socon kale ee aad Android, iPod, iPhone iyo iwm
Tani waa mid kale oo ka doondooneen kadib free video Converter, editor iyo ciyaaryahan Windows iyo Mac. MPEG Streamclip ciyaari kara oo badan video files ahayn MPEGs. Converter video Tani waxay u bedeli karaan MPEG files ku lug leh qaabab muxed ama demuxed iyo encode karaa videos in qaabab kale oo ka mid ah iPod. MPEG Streamclip aad u saamaxaaya in ay soo bixi videos ka YouTube ama Google kaliya ay galaan URL bog ee.
Developed tan iyo 2005, MediaCoder waa software ah warbaahinta transcoding waa caanka ah ee dunida oo dhan. Waxay soo bandhigaysaa boorish kaamil ah audio goynta-qarkiisa iyo technology video galay xal-ka-sanduuq oo transcoding. Waxaa qoreysa tiro koobin qabsan kara in aad gacanta ku transcoding. MediaCoder ma aha in si sahlan, laakiin waxaa hubaal waa ugu fiican marka ay timaado qaab oo tayo leh.
ClipConverter (Converter Online)
Clip Converter waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee diinta online media kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo, download duubto video ama URL audio ee si kasta oo ah qaabab kale. Waqtigan xaadirka ah, adeegyada ClipCoverter taageerada ka mid ah Direct Download, Dailymotion iyo YouTube mid ah kuwa kale. Clip Converter waa lacag la'aan ah iyo sidoo kale ugu dhaqsiyaha badan si aad u awood in daawashada ugu jeclaa YouTube videos on telefoonada gacanta, iPhone, PSP iyo qalab kale oo badan.